1. Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad ugu isticmaasho geerida cuncunka? J: waxay kuxirantahay badeecada iyo sifooyinka maadiga ah. Alaabooyinka sida joogtada ah loo feerari karo waxay isticmaali karaan mashiinka goynta tooska ah ee dhinta (oo leh shaqooyin isku dhafan), sida: cajalad dhejis laba-dhinac leh, xaashiyaha faafin, iftiin la isticmaalay ...
Fahmitaanka caaryada qalabka Waxaa jira in ka badan 100 nooc oo mindiyo ah marka loo eego xagasha daab, adkaanta daab iyo daab, hadhuudhka daabka iyo farsamada wax soo saarka dusha sare ee daab iyo daab. Horumarinta iyo soo saarista caaryada qalabka waxay ku saleysan tahay fahamka qotada dheer ee macaamiisha ...
by idaacadda Subaxnimo 20-09-27
Bishii Janaayo 4deeda, Casho-sannadeedka ayaa loo qabtay in loogu dabaaldego sanadka cusub. Maamulaha guud ayaa hadalka jeediyay si uu ugu mahadceliyo tabarucaadka ay sameeyeen dhammaan xubnaha qoyska intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay waxayna abaalmariyeen shaqaalihii ugu fiicnaa. Dadaalka dhammaan, waxaan ku helnay waxqabadka ugu wanaagsan ee ...
Bishii Maarso 27th 2019, Yuebaixiang waxay kaqeyb qaadatay Shenzhen International Die iyo Mold Expro, halkaas oo aan ku tusnay alaabada saxda ah ee Dhimista iyo Cut-Die macaamiisheena oo aan ka helnay aqbalaad iyaga. Laga soo bilaabo barta carwada sanadkaan, maxay macaamiisha yihiin ...
Auto-Waxyaabaha Buuxinta xardho dhinto, Maaskarada Rotary Die, Birta xardho steel, Laser dhinta, Qashinka-Daadinta Soo-saarista Rotary Die, Muraayadda Dusha sare ee Muraayadda oo Dhinta,